Bolsonaro, shamwari yeBrazil !! ? – JucelinoLuz
izvo zvine chekuita nekuzvimiririra uye zvido zverudzi; kuda nyika; munhu inofarira nyika, yedzidziso yezvematongerwo enyika inoita kuti nyika ive kukosha kwakakwana.
Muvengi wehuwori uye hwehutambudzi hwehudzvanyiriri hwakaiswa muBrazil
Jair Bolsonaro acharamba achirwisa masangano, sezvo zviri kubva kwavari kuti vadzvanyiriri nevanhu vane huori vanozvarwa muBrazil. Icho chikamu chezvematongerwo enyika. Iyo inosangana nehutongi hwehutongi hwemutemo uye inoona kubiridzirwa kunopokana nevanhu, uko ivo vanowana mari pamwe nehuwori vanochengeta tsika ye (tora) kuno, nekufarira zvisiri pamutemo uye kubiridzirwa kwemari kubva muhomwe yeruzhinji kweanopfuura makore makumi mashanu nevezvematongerwo enyika avo swedera pedyo nevanhu, kungotora mukana … Uye hachisi chinhu chitsva chinodzivirira vanhu veBrazil. Akaita nenzira iyi kwemakore makumi matatu ehupenyu hweparamende. Iwo masimba akatemerwa kushandisirwa mukuda rusununguko rwegutsaruzhinji nehunhu hwebumbiro pasina kuwana mhinduro yakakwana, kusanganisira mundima yepamutemo. Aiita semunhu kwaye. Nechikonzero ichi, vachibatwa nevanhu vane huwori uye vavengi vavo sevanopenga, mugari ari padhuze nekutongwa – ndeyekuti vanhu vese vane huwori muBrazil vanoda, zvachose mukuona kweavo vanonyengera vanhu, kusava nehanya uye izvo zvaisatombokodzera chero chikamu chekupindura maDemocrat uye, ndoda, majaji. Ndokunge, avo vanochengetedza hupenyu hwehutariri, vachiregedza makororo, mbavha, kuchengetedzeka, hutano, uye zero dzidzo, nekunyadziswa kwevanhu – uye haasi kuburitsa mari kana kuchinjana makomborero kubva kuhurumende yemubatanidzwa, saka idzi dzinofungidzirwa matsotsi ita semhuka uye gadzira zvese kubvisa uyu mugari akanaka kubva kuHutungamiri. Zvinofungidzirwa kuti boka iri rinoita bhizinesi nehurumende kunze kwenyika – mukutengeserana muchivande nemisangano, ndokuti mhosva yekumukira nyika, uye zvakare kushandisa Chinyorwa 142.
Nguva yakafamba uye ma diatribes evanhu vane huwori aya akasvika pamugumo, ivo vanoda kushandura vaseki kuva majee, “mablagi”, ndosaka vachifanira, hongu, kujoina mamirioni evanotsigira nyika murunyararo uye murunyararo, kuenda kumamaki nekuratidzira muBrasília, mu pamberi pedzimba dzinofungidzirwa dzakagadzirwa nevasingabatike nevakaipa, vasingavabvumidze kuti vapinde imomo – nekuti simba ravo riri mumaoko evanhu veBrazil, avo vanoshandisa mutemo, kupara mhosva, kutyora nekutyora tsika dzeBrazilian Constitution. , nekuti mukuratidzira kwekare kwakadzokororwa sekunge vaifanirwa kukosheswa nezviri mukati, asi – uye panguva iyoyo yaive imwe yemhosho – isina njodzi nekuti vanoramba vachiseka vanhu veBrazil – sezvavakaita kare – vachiziva kuti pane zvinokanganisa pakati pavo uye havazombotongana, kana kubvisa avo vane chekuita nehuwori nematsotsi kubva pasimba – maBrazil vanoda pamwe chete, vape imwe, zvakwana! Vagari vanozowana nzira yepamutemo yekubvisa hudzvanyiriri kubva ipapo, padhuze zvichienderana nechibvumirano. Kuneta uku kwekuvharira vanopandukira, vanopokana nedemokrasi, uye kudzivirira kutyorwa kwekodzero dzevanhu hurukuro (chimwe chinhu chinongova neruremekedzo muBrazil kuvanhu vanopara mhosva). Kutora odes kuhutongi hwehutongi hwekondinendi iri zvakare chikamu chematongerwo enyika eCPI nevatsigiri vayo, iyo STF, iyo yanga ichipwanya Bumbiro uye ichitevera nekushandisa kusarura kwebato mumasarudzo ayo. Izvo zvakagadzira hunhu hweasinga batike eJustice ayo akakura nekukundikana kwega kwega kwevashoma vemasisitimu mukudzivirira kwetsika, kuchengetedzeka kweruzhinji nemutemo uye kufambira mberi kwehupfumi.
Kudzora odes kuhutongi hwehutongi hwekondinendi iri zvakare chikamu chemadhimoni ezvematongerwo enyika menyu enhengo dzakabatana nematsotsi akarongeka muBrazil
Kudziya kwevanodzvinyirira kwakadai uye kuona kwezvematongerwo enyika kwevatungamiriri vakuru venyika kwakabvumidza nhengo idzi dzehuwori uye mhosva dzakarongeka kuti dzive zvishoma nezvishoma kune avo vakaodzwa mwoyo ne “zvematongerwo enyika ekare.” Asina hurukuro yehupenyu yaizomubvumidza kunyara kuratidza maonero enyika, akaramba ari munzvimbo inoonekera kuburikidza nekurwiswa kwakarongeka, kushandiswa kwemajeri, kubvisa zvirimo mu ‘internet’ uye mapepa kubva kuhurongwa hwakagadzwa. Kutora mukana wenguva – iyo isingazombodzokororwa – yekupfeka zvemasangano, senge kuburitswa kwevakawanda vane huwori nematsotsi, musangano wakahwanda naAmbassador, magavhuna uye yakavhura mukana wekuti vape zvirevo zvemitemo zveudzvanyiriri zvakasangana pakati pemamwe masimba, kureva , Covidão – kuti gare gare, kunyongana kuchamuka, uye ndiani asina kana hanya neiyi CPI, nekuti, mune ramangwana, mhosva dzakapara dzapera zvino, sezvakaitika mune akati wandei, seMensalão, Petrolão, Lava Jato, vamwe vazhinji, izvi zvisati zvamboitika, zvakatorwa zvakakomba nevezera rake muChamber – ingo rangarira kuti paive nezviitiko zvakati wandei, hapana munhu anoda kurangarira kana kutonga matsotsi aya, ndoda kubviswa kweveMDC Minisiti, hugaro hweImba. . Zvese zvinhu zvinogara zvichipesana nekuda kwevanhu veBrazil.
Basa razvino nderekudzivirira kufunga, zvakare, zviito zveBolsonaro zvakangofanana nekunyepedzera. Matsotsi aya haasi nyore. Uye huori hunouraya zvakawanda, kutyora muhomwe yeruzhinji, vamiririri veimwe masimba muBrazil, vanomiririra kutyisidzira kukuru kune democracy uye budiriro yakanaka kune vese muBrazil.
Vari kukanda zita reBrazil mumatope kunze kwenyika, vari kuedza kukutonga kuburikidza nekutya, vari kuda kuramba vachikuba, sezvo vazhinji vatove kuba nhasi, chikamu cheJustice chinoshandisa mutemo neBumbiro, mukuita kwekusaruramisira , vanoba kubva kuvarombo uye vakatendeseka, vachirasa hutano, dzidzo uye kuchengetedzeka kwevanhu. Ivo vanoda kuti iwe usashande uye ushupike… Mune mamwe mazwi, ivo vanoda kuona maBrazilians akanyudzwa mumatope ekusaenzana munharaunda. Chikamu cheSensational Media hombe inowana mamirioni ekukunyengera iwe.
Iwe unovhota zvisirizvo, kana nekutsinhana zvido, nemureza webato, rangarira izvi, ndiwe wega unokonzeresa kuparadzwa kweBrazil!
Inguva yeruoko rwako, yemubatanidzwa wako, kuti ubvise hudzvanyiriri, matsotsi, nehuwori kubva kuBrazil.
Prof. Jucelino Nobrega da Luz – muongorori, anokurudzira uye gwara remweya